मृत्युदण्डको पक्ष लिन सक्दिनँ :महान्यायाधिवक्ता खरेल - Janadesh Khabar
बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याजस्ता जघन्य अपराधका मुद्दामा पनि पञ्चायतले मिलापत्र गराएका समाचारहरू आइरहेका छन् । आफूलाई गाउँ–ठाउँका जान्नेसुन्ने ठान्नेहरू मात्र नभई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसमेत दण्डनीय अपराधमा गैरकानूनी मिलापत्र गराउन संलग्न छन् ।
मिलापत्रका नाममा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने पञ्चायत र मृत्युदण्डबारे नेपाल सरकारको धारणा के छ रु एसिड आक्रमणजस्तै बलात्कार अपराधलाई पनि विशेष सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेशको तयारी गरेको छ ? यीलगायतका विषयमा प्रश्न र सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको उत्तर :
बलात्कारीलाई सजाय दिने कानुन छ । फौजदारी दण्डसंहिताले ल्याएको व्यवस्था विगतको भन्दा कडा पनि छ । यो कानून लागु भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । तर, अपराध बढेपछि यो कानुनी उपचार पर्याप्त हो त रु भन्ने प्रश्न समाजमा उठेको छ ।
बलात्कारमा पनि सजायमा बढेको छ । र पनि, अपराध किन घटिरहेको छैन रु यो पक्ष हेर्न जरुरी छ । बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड या नपुंशक बनाउनेखालको सजाय गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन ? २०४७ सालको परिवर्तनसंगै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै हामीले मृत्युदण्ड दिने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन, कुनै व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभुति गर्‍यौं ।
भारतमा त्यस्तो व्यवस्था छ, तर बलात्कार रोकिएको छैन । ज्यान लिने कानुन हुँदाहुँदै किन अपराध नरोकिएको रु भारतमा त्यस्तो कानून हुँदाहुँदै पनि बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कारपछि हत्याका घट्ना घटेका छैनन् ।
अर्को पाटो हेर्नुस्, मृत्युदण्ड दिने कानुन नभएका देशहरूमा पनि शान्ति सुव्यवस्था छ । अपराध कानुनको दायरामा तथ्य–तथ्याङ्कबाट हेर्दा ती देशमा अपराध संख्या कम देखिन्छ । त्यसकारण, बलात्कार कसुरको निम्ति मृत्युदण्ड नै उपयुक्त ओखती हो, होइन भन्नेमा गम्भीर सोचविचार हुनपर्छ ।
हामीले विद्यमान कानुनहरूको कति प्रचार गर्‍यौं रु म तपाईंहरुलाई सोध्न चाहन्छु– कुनै ठाउँमा गएर घटनाबारे लेख्नुहुन्छ, प्रचार गर्नुहुन्छ । त्यो आवश्यक पनि छ । म मिडिया हेरेर पनि निर्देशनहरू जारी गरिरहेको हुन्छु । तर, त्यही कुरा अदालतमा गएर फैसला भएका कतिवटा केसबारे लेख्नुभएको छ रु २० वटा घटनाको समाचार आउँदा १० वटा फैसलाको पनि समाचार आउँदैन । अर्थात्, कानुनबारे प्रचार–प्रसार कम भयो ।
पञ्चायतीलाई सम्बोधन गर्न थप कानुन वा भएको कानुनलाई संशोधन चाहिन्छ भन्ने हो?
पीडितको मनोविज्ञानलाई विचार गरेर मुद्दा प्रक्रिया नटुङ्गिदासम्म मनोपरामर्शदाताको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन र रु उपचार, कानूनी लडाईँ सबै राज्यले जिम्मा लिए पञ्चायतीले मिलाउन खोज्दा पनि पीडितले हुँदैन, म अदालत नै जान्छु भन्न सक्थे कि ?
अहिले मुद्दाहरूमा निकै ठूलो प्रतिशतमा बढोत्तरी भएको छ । अपराध बढेअनुसार पीडितको संख्या बढ्नु स्वभाविक हो । सबै मुद्दामा मनोपरामर्श दिन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन रु यो एउटा प्रश्न छ ।
अपराधी मर्दा अपराध पनि मर्छ भन्ने कानुनको सिद्धान्त छ । मरिसकेको व्यक्तिमाथि अब मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था रहेन । मुद्दा चल्दैन भनेपछि पीडितले पाउनुपर्ने न्याय पनि मर्‍यो त रु यो प्रश्न अगाडि आयो । मृतक पीडकको सम्पति पनि छ, तर त्यो सम्पति पनि कानुनबमोजिम भन्दा अरु ढङ्गले जफत हुन सक्दैन ।
यस्तो अभ्यासमा नभएकाले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नयाँखालको केस पठाएको छु हेरिदिनुहोला भनेँ । उहाँले प्रक्रियामा आओस् भन्नुभयो । मैले अलि ठूलै रकम राखौं भनेको थिएँ । तर, कर्मचारीतन्त्रले आँट गरेन, एक लाख रुपैंयाँ राखेर पठाए । पछि प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा हेरेर पाँच लाख रुपैंया क्षतिपूर्ति भनेर निर्णय गर्नुभयो । त्यसपछि अरु ५र७ जनाले पाए । अहिले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति हुन्छ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा अनुसन्धान प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्नेछ भनेका थिए । प्रहरी र सरकारी वकिलका अनुसन्धान–तहकिकातमा सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ रु
२ कात्तिक २०७७, आइतवार १५:१६ बजे प्रकाशित
संसद सचिवालयलाई पत्र, मेरो दसैँभत्ता फिर्ता लिनु: भीम रावल